जेलबाट बालकृष्ण ढुंगेलले नेकपा महासचिव विप्लवलाई पठाए यस्तो सन्देश, के भने विप्लवले ? — Imandarmedia.com
जेलबाट बालकृष्ण ढुंगेलले नेकपा महासचिव विप्लवलाई पठाए यस्तो सन्देश, के भने विप्लवले ?
जनयुद्धकालिन मुद्दामा जेल चलान भएका माओवादी नेता बालकृष्ण ढंगेलले पहिलोपटक जेलबाट एउटा सन्देश छोडेको छन् । सहकर्मीहरु चुनावी मैदानमा होमिएका बेला आफु भने जेलको कष्टकर जीवन व्यतित गरिरहेका ढुंगेलले सन्देश पठाएपछि माओवादी केन्द्रको ध्यान यता पनि केन्द्रित हुने देखिन्छ ।
जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि भोट माग्दै चितवनका गाउँगाउँमा पुगिरहेका छन् । उनीमात्र होइन उनको सिंगो पार्टी नै भोट माग्नमा व्यस्त छ यतिबेला । बर्षमान पुन रोल्पामा छन्, कृष्णबहादुर महरा दाङतिर छन् । अन्य नेताहरु पनि आ-आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा निक्कै खटिएका छन् ।
तर चुनावमा भोट माग्नेहरू मात्र हैन केही सहकर्मीहरु भने चुनाव खारेज अभियानमा जुटेका छन् । तर, बालकृष्ण भने कात्तिक–मंसिरको चिसोमा जेलमा रातहरु बिताइरहेका छन् ।
जेलमा रहेका माओवादी नेता ढुंगेलले यतिबेला सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र या प्रचण्डलाई सन्देश पठाएका भने कदापी होइनन् । उनले चुनाव खारेज अभियानको नेतृत्वकर्ता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सम्झेका छन् । नेता ढुंगेलले नेकपा महासचिवलाई विप्लवलाई सम्झेका छन् ।
यतिबेला उनले जेलमा महासचिव विप्लवलाई सम्झिरहेको कुरा उनका एक शुभचिन्तले बताएका छन् । आफुले महासचिव विप्लवलाई सम्झेको सन्देश विप्लवसमक्ष नै पुर्याइदिन पनि ढुंगेलले आग्रह गरेको ति शुभचिन्तकले बताए ।
“ढुंगलेजीले आफूले विप्लवलाई सम्झिरहेको बताउनुभयो। आफूले सम्झिरहेको कुरा विप्लवलाई भनिदिन समेत भन्नुभएको छ” बालकृष्णका शुभचिन्तकले भने । तर ढुंगेलले चुनावी प्रचारमा लागेका अन्य नेताहरुको बारेमा केही नसोधेको समेत उनले बताए ।
नेता ढुंगेललाई जिल्ला अदालतले गत १४ गते सदरखोर डिल्लीबजार चलान गरेको हो । १४ गते विहान ललितपुरको सातदोबाटोबाट पक्राउ परेका ढुंगेललाई अपरान्ह काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको थियो ।
उनलाई अदालतको अनुमतिपछि जेल चलान गरिएको हो । अदालतका अनुसार ढुंगेल १२ वर्ष पाँच महिना २२ दिन जेल बस्नु पर्नेछ । ८ बर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतले ढुंगेललाई एक द्वन्द्वकालीन हत्यामा दोषी ठहर्राएको थियो । ढुंगेलले यस घटनामा आफु निर्दोष रहेको बताउँदै आएका छन् ।
यता ढुंगेल गिरफ्तार परेलगत्तै उनलाई तुरुन्त रिहा गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले माग गरेका थिए । ढुंगेलमाथि लगाएको झुठा मुद्दा तत्काल खारेज गरी मुक्त गर्न महासचिव विप्लवको माग छ ।
ढुंगेलको गिरफ्तारीले जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने नेता, कार्यकर्ता र जनयुद्धका सम्पूर्ण पक्षधरहरुहरुलाई स्तब्ध र आक्रोसित बनाएको उनको भनाई छ । ढुंगेल पक्राउ परेपलगत्तै विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै महासचिव विप्लवले जनयुद्धका योजनाकारहरुलाई सरकारमा सहभागी गराएर कार्यकर्ताहरुलाई दोषी बनाई जेल हाल्नु अराजनैतिक र अनैतिक भएको बताएका थिए।
‘यो घटनाले जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने नेता, कार्यकर्ता र जनयुद्धलाई साथ दिने सम्पूर्ण जनतालाई स्तब्ध बनाएको छ ।’ महासचिव विप्लवद्वारा जारी गरिएकोको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,- ‘क्रान्तिका क्रममा भएका घटनालाई आन्दोलनबाट अलग गर्ने र आन्दोलनमा विशेष योगदान गर्ने व्यक्तिलाई अलग गरेर आन्दोलनका विषयलाई व्यक्ति विशेषको अपराध बनाएर बस्तुत: क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई बदनाम र कमजोर बनाउने कार्य दलाल संसदवादीको षड्यन्त्रपूर्ण र प्रतिक्रान्तिकारी कार्य हो ।’ ढुंगेललाई पक्राउ गरेको विरोधमा नेकपाले १६ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन समेत गर्यो ।
यद्यपि ढुंगेललाई सर्वोच्चका तत्कालिन न्यायाधीशहरु तपबहादुर मगर र राजेन्द्रप्रताप कोइरालाको संयुक्त इजसाले सुनाएको सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसलामा गम्भीर त्रुटि फेला परेको छ ।
ढुंगेललाई सरकारी वकिलको दाबीअनुसार सर्वोच्चले कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (१) (सर्वस्वसहित जन्मकैद) अनुसार कारबाही गर्न आदेश दिएको छ । फैसला गर्ने क्रममा घटना भएको हो कि होइन भन्ने पुष्टि गर्ने प्रयास गरिएको छ । त्यसमा उज्जनकुमारको शवको पोष्टमार्टम रिपोर्टले उनको हत्या भएकोपुष्टि गरेको जिकिर गरिएको छ । जबकि उज्जनकुमारको शव अहिलेसम्म फेला परेको छैन ।
उनकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले समेत आफ्ना भाईको शव समेत गायब पारिएको बताउँदै आएकी छन् । फैसलामा अर्को पनि गम्भीर त्रुटि फेला परेको छ । हत्या भएको भनिएका व्यक्ति भुवन भनिने उज्जनकुमार हुन् । तर, न्यायाधीशको फैसलामा भुवन भनिने उज्वलकुमार लेखिएको छ ।
‘फैसलामा भनिएको छ, ‘पोष्टमार्टम रिपोर्टबाट मृतक भुवनकुमार भनिने उज्वलकुमारको (उज्जन हुनुपर्नेमा) कर्तव्यबाट भएको भन्नेमा विवाद भएन ।’
‘अहिलेसम्म फेला नपरेको शवको अदालतले कसरी पोष्टमार्टम भयो भन्ने दाबी गरेको ?’, ढुंगेलका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता सशीतराज मैनालीले भने, ‘मारिएको भनिएको व्यक्ति उज्जन हो, तर फैसलामा भुवन भन्ने उज्वलकुमार लेखिएको छ ।’ मैनालीले अदालतको फैसला गम्भीर त्रुटिपूर्ण भएको बताए ।
‘लासै फेला नपरेको अवस्थामा कसले, कहाँ र कसरी पोस्टमार्ट)म गरेको हो ?’, मैनालीले प्रशन गरे । उनले यो हदसम्मको त्रुटि गर्ने छुट सर्वोच्च अदालतलाई नभएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार जिल्ला वा पुनरावेदन अदालतको गल्ती भएमा माथिल्लो अदालतले सच्याउन सक्छ ।
तर, सर्वोच्च भन्दा उपल्लो कोही नभएकाले त्यस्ता गम्भीर गल्ती हुन नहुने उनको भनाइ थियो । ‘यो फैसलाले न्यायालयको मर्यादा, स्वतन्त्रता र जनआस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ’, उनले भने । उनले फैसलाको कमजोर आधार हेर्दा राजनीतिक रुपमा असाध्यै पूर्वाग्रही भएर गरिएको फैसला भन्न सकिने बताए ।
मैनालीले ढुंगेलसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्न सकिने बताए । तर, त्यसका लागि बालकृष्ण ढुंगेलले पुनरावेदन दिनुपर्छ । पुनरावलोकनको म्याद १ सय दिनको हुन्छ ।
‘फैसलामा गम्भीर त्रुटि भएकाले सच्याई पाउँ भनी ढुंगेलले निवेदन दिन सक्छन्’, उनले भने । पुनरावलोकनमा गए फैसला सच्याउन सर्वोच्च बाध्य हुने जिकिर उनले गरे । ‘सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्न बाध्य हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘पुनरावलोकनको विकल्पै छैन ।’ पुनरावलकोनबाट ढुंगेल रिहा हुनेमा मैनालीले विश्वास व्यक्त गरे ।
एमाले पूर्वसांसद समेत रहेका अधिवक्ता रेवतीरमण भण्डारीले अदालतको फैसलालाई ‘तथ्यमा गम्भीर त्रुटि भएको फैसला’ भएको बताए । उनेल पनि फैसलाको पुनरावलकोन हुने बताए । ‘तथ्यमा गम्भीर त्रुटि भएको फैसला हो’, उनले भने, ‘त्यस्तोमा पुनरावलोकनमा जान पाइन्छ ।’
भण्डारीका अनुसार न्यायप्रशासन ऐन- २०७३ ले कानुनी व्यवस्थामा त्रुटि भएको वा तथ्यमा त्रुटि भएको विषयमा पुनरावलोकनमा जान पाउने व्यवस्था गरेको छ । ढुंगेलले जेलबाट पठाएको सन्देशबारे महासचिव विप्लवले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।